မန္တလေးဂေဇက်အယ်ဒီတာချုပ်ကိုခိုင်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်မွေးသမိခင်ကြီး ကွယ်လွန်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » မန္တလေးဂေဇက်အယ်ဒီတာချုပ်ကိုခိုင်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်မွေးသမိခင်ကြီး ကွယ်လွန်ခြင်း
မန္တလေးဂေဇက်အယ်ဒီတာချုပ်ကိုခိုင်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်မွေးသမိခင်ကြီး ကွယ်လွန်ခြင်း
Posted by pwint pwint on Jul 27, 2012 in Myanmar Gazette | 147 comments
မန္တလေးဂေဇက်အယ်ဒီတာချုပ်ကိုခိုင်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်မွေးသမိခင်ကြီး ကွယ်လွန်သွားကြောင်း ကြားသိရတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ထပ်တူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်။ (မန်ဘာများ ကျေးဇူးပြုပြီး like မလုပ်ပဲ မှတ်ချက်ရေးပေးကြပါ)
pwint pwint has written 1 post in this Website..
View all posts by pwint pwint →
လောကသဘာဝထဲ မွေးဖွားခြင်းသဘောရှိတဲ့ သတ္တဝါအတွက် ရှောင်ဖယ်မရတာက
လောကသတ္တဝါ လူသားတစ်ယောက်ဟာ လောကသဘာဝအတိုင်း ဖြစ်သွားတာကို ဝမ်းနည်းစရာလို့
ကျုပ်တော့ဖြစ် နည်းနည်းလေးမှ မတွေးမိပေါင် ( ဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင် ဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင် )
ငယ်ငယ်လည်းသေတတ်တာဘဲ ကြီးကြီးလည်းသေတတ်တာဘဲ ( သဘာဝ )
ဒါပေသိ လူတို့လောကသဘောအရ လောကွတ်စကားတွေတော့ရှိကြပေသပေါ့
အမေကိုမသေခင်ကြွေးမွေးကြ သေမှအော်မငိုနဲ့ လို့ဆိုတာလေးပါ ( ဒီလူကြီးသည်းခြေပျက်မည်မထင် )
ကောင်းတဲ့ဖက်ကတွေးတော့ ဒီလူကြီး ဖေကြီးမေကြီး တွေကို အသက်ရွယ်ရင့်ကျက်တဲ့အထိ
နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့တာလေး အရပ်စကားနဲ့ပြောရရင် တော်တော်ထူးတဲ့ကုသိုလ်ဘဲ
ကျုပ်လည်း ကျုပ်မသေခင် ဒါမှမဟုတ် ကျုပ်အဘနဲ့ ကျုပ်အမေ မသေခင်
အဘနဲ့ အမေကို တွေခြင်းမိပါရဲ့
ဟုတ်ပါတယ် ဘပု ။ ဒီအသက်အရွယ်ထိ မိဘကို ပြည့်စုံစွာလုပ်ကျွေး ပြုစုခွင့်ရခဲ့တာဆိုတော့ ဖြေသာမယ် ထင်ပါတယ်။ ကုသိုလ်ထူးပါတယ်လေ။
ဘပုလည်း အချိန်ရှိတုန်း မိကြီး ဘကြီးများနဲ့ စုုံစုံလင်လင် နေနိုင်ပြီး ပြုစုခွင့်ရပါစေလို့။
ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းရပါတယ် ဦးခိုင်။ မိခင်ကြီး ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။
ပြန်သွားတော ့လည်း တစ်ယောက်ထဲနော့
ဘဝရိပ်မြုံ ကကြိုးစုံခဲ ့
တို့လျှင် ဧည် ့သည်ပါတကား…
သူကြီးနဲ့အတူထပ်တူထပ်မျှဝမ်းနည်းပါတယ်သူကြီးရေ။ ကျွန်တော်ပြုလုပ်ခဲ့သမျှသော ဒါနသီလဘာဝနာ ကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတို့ကို သူကြီး၏ မိခင်ကြီးအားအမျှပေးဝေပါတယ်။ ရောက်ရာဘုံဘဝမှ သာဓုခေါ်ပါလေ။
မွေးတဲ့သူတိုင်းတနေ့မှာသေကြရမှာပါပဲ။ လူတွေဟာမွေးနေ့ဆိုပြီးပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေလုပ်နေကြမဲ့ မွေးနေ့ကျော်ရင်အသက်တစ်နှစ်ပိုကြီးလာပြီး သေဖို့တနှစ်ပိုနီးလာတယ်ဆိုတာကို သတိပြုမိတဲ့သူတော်တော်ရှားပါတယ်။
သူကြီးနဲ့အတူ ထပ်တူထပ်မျှဝမ်းနည်းကြောင်း။ သူကြီးဦးခိုင် မိခင်ကြီး ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။
ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းရပါတယ် ဦးခိုင်။
Dear Ko Kai,
Never known you in person nor your mother but reading your ideas/posts on MG, I can imagine what type of person you are and also imagine the mother who could raise suchason. She will only go to the better place in her next life “Thathayar”…..
Sorry for your loss but death is part of our lives…
သဂျီး အတည်ပြုချက် မပေးသေးပါလား..။ အဟုတ်ဆိုရင်တော့ မိသားစုနဲ့ ထပ်တူ ဝမ်းနည်းရပါသည်။
ဦးကြောင်ကြီး သူကြီးအတည်ပြုပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောထားပါတယ် ရှေ့ဆုံးကွန့်မန့်မှာပါ။
ဆောဒီးဗျာ မဖတ်မိလိုက်လို့ပါ။ ဒါနဲ့ ရွှေကြည်လေးက သူ့သမီးလား၊ ဦးကြောင်ခြစ်ပါရစေ။
အဖေဆုံးကြောင်း သူငယ်ချင်းပို့တဲ့ အီးမေးလ် အလုပ်ထမင်းစားချိန်မှာ ဖတ်ရစဉ် မငိုဘဲနဲ့ မျက်ရည်တလဟော ကျခဲ့တယ်။ တားဆီးမရ သူ့အလိုလို ထွက်လာတယ် သို့ပေမဲ့ မငိုကြွေးခဲ့မိဘူး၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြန်လည်းမပြန်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ လောကမှာ မျှော်လင့်ထားပြီးသားဆိုရင် ကြုံလာတဲ့အခါ စိတ်ဖိစီးမှုသောက အထိုက်အလျောက် နည်းပါးစေပါတယ်။
ဦးဦးကြောင် ရွှေကြည်ကသူကြီးရဲ့သမီးမဟုတ်ရပါဘူး။ ဦးကြောင်ကြီးအဖေဆုံးသွားကြောင်းသိရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ မပြန်နိုင်ခဲ့တာကိုလည်းနားလည်ပါတယ် တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်။
လာတုံးကလဲ တယောက်ထဲ သွားတော့လဲတယောက် ထဲ ဒီခရီးက လူတိုင်းမလွဲမသွေ သွားရမဲ့ခရီးပါ။ထပ်တူ ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။
ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ် ၊ ကျနော်လဲ မိဘများ ရှိနေဆဲမို့ ကိုခိုင်လို မိဘတွေအတွက်
စိတ်မကောင်းဖြစ်မှု များနဲ့အတူ ကောင်းရာမွန်ရာ ဘုံဘဝ ကိုရောက်ပါစေလို့
မိဘဆိုတော့ အတိုင်းအဆမဲ့ ခံစားနေရမယ်ဆိုတာ ပြောဖို့တောင်မလိုပါဘူးဗျာ။ သဂျီးနဲ့အတူ ထပ်တူဝမ်းနည်မူများနဲ့ ကောင်းရာ ဘုံဘဝကို ရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။
မန္တလေးဂေဇက်အယ်ဒီတာချုပ်ကိုခိုင်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်မွေးသမိခင်ကြီး ကွယ်လွန်သွားကြောင်း ကြားသိရတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ထပ်တူ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်ခင်ဗျာ…
တစ်နေကွယ် သေနယ်သို့ တစ်ခါကူး
လူသားတိုင်းအတွက် သေဆုံးခြင်းက ဓမ္မတာဆိုပေမယ့် မိခင် ဆုံးရှုံးတဲ့အခါ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစိတ်က ဘာနဲ့မှ အစားထိုးမရသလိုပါပဲ ။
ဒါပေမယ့် မသေခင်အချိန်ထိ ကျွေးမွေးခွင့်ရလိုက်တယ်ဆိုတာကိုက အမြတ်ပါပဲ ။ မိသားစုနဲ့ အတူ ဝမ်းနည်းရပါတယ် ။
သာဓုခေါ်နိုင်တဲ့ ကောင်းရာဘုံဘဝရောက်ရှိပါစေ ။
သဂျီး ရေ လူချင်း မမြင် ဖူးပေမယ့် စာတွေ ကတဆင့် ရင်းနှီး ပြီးသားဆိုတော့ မိသားစု နဲ့ထပ်တူ ဝန်းနည်းမိပါတယ်။ ဘာပဲ ပြောပြော သဂျီး က ဒီ အရွယ် ထိ မိစုံ ဖစုံ နေ ခဲ့ ရတယ်ဆိုတော့ အများ ကြီး ကံကောင်းပါတယ်။ ကျန် ခဲ့ ဖခင် ကြီး အပေါ် ပို ပြီး ဂရု စိုက်ပေးလိုက် ပါ နော်။ နှစ် ရှည် လများ လက်တွဲ ခဲ့ တဲ့ အိမ်ထောင် ဖက် ဆုံးရှုံး ရတဲ့ သောက ကို အမျိုး သမီးတွေ ထက် စာရင် အမျိုး သားတွေ က ခံနိုင် ရည် ပိုမရှိတတ်ဘူးဆိုတာ ကျမ အဖိုး တုန်း ကကိုယ်တွေ့ ကြုံ ဖူး ခဲ့ တယ်။ သားသမီးတွေနဲ့ မြေး တွေ က ပိုပြီး ဂရု စိုက်ပေးဖို့ လိုပါတယ် ။
ဝမ်းနည်း မိပါတယ် ကိုခိုင်ရေ ၊ မတည်မြဲတဲ့လောကကြီးမို့ ကောင်းရာသူဂတိလားပါစေလို့တောင်းဆု့ချွေလိုက်ပါတယ်၊
လုးသားတွေဟာ ဘယ်လောက်ကိုယ်ဟာကိုယ်လုပ်တယ်ပြောပြောကိုယ်မလုပ်တဲ့အရာ ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အရာတွေဟာ
လို့ အများကြီးပါ၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှ လုပ်နေတာတွေအများကြီးပါ၊သီးသန့်ဆောင်းပါရေးပါအုံးမယ်၊
ကိုယ်ဟာကိုယ်လုပ်ပါတ်.လို့အော်နေတဲ့ ပါစပ်ပေါက်တောင် သူဖေါက်ပေးလိုက်တဲ့အပေါက် ကအော်နေရတာပါ၊
လူမှဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတာတွေထဲ့က အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုချိုယွင်းသွားရင်တောင် နိုင်ငံတကာကပညာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးလုပ်တာ
တောင် ၊နဂိုစွမ်းရည်မရနိုင်ကြပါဘူး၊ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ ပရွက်ဆိတ်ကလေးတစ်ကောင်လောက်တောင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့
စွမ်းရည်ရအောင် လူသားတွေပညာရှင်တွေမဖန်တီးနိုင်ကြပါဘူး၊ ဒါကို စွတ်ပြီးကိုယ်ဟာကိုယ်လုပ်တယ်အော်နေကြတာတွေကို သနားမိပါတယ်၊
လူသားတွေရဲ ဇောက သေခါနီး မှာရောဂါတွေကြားထဲမှာ အားမရှိလှပါဘူး၊ ရှင်သန်စွမ်းရည်ပြည့်နေတုံးမှာတောင် ဇောနဲ့မကူးနိုင်တာ
သေတဲ့အခါမှ နောင်ဘဝကူးတယ်ဆိုတာ .. တကယ်တော့ ..မဟုတ်ပါဘူး၊သေသေချာချာဆောင်းပါရေးပြီးအမှန်တရားကို
လူသားတွေသိအောင်ပြေပြပေးပါမယ်၊ ဒါမှ လူသားတွေကို ဘုရားသခင်စေလွတ်လိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်၊သွားရမယ်လမ်းခရီး၊ရှောင်ကျဉ်ရမယ်ကိုယ်ကျင့်တရားတွေကို သေသေချာချာသိရှိသွားကြမှာပါ..
ထပ်တူထပ်မျှ .. ကြွေကွဲရပါကြောင်း …ခင်ဗျာ
ဆုံးတကာ ဆုံးရှုံးမှုတွေအထဲမှာမှ ပြန်လည် အဖတ်ဆယ်ယူလို့ မရသော ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အတွက်
ဦးလေး သူကြီး မိသားစုနဲ့ ထပ်တူ ဝမ်းနည်းကြေးကွဲရင်းးး
အမျှပေးဝေမှုအားလုံးကို မိခင်ကြီး ရောက်ရာဘုံဘဝမှ သာဓုခေါ်နိုင်ပါစေ ….
သူကြီးမင်း ရဲ ့မွေးသမိခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီး ကောင်းရာဘုံဘဝရောက်ပါစေ……
ရွှေကြည် ပြောမှ သူကြီး ရဲ့ မှတ်ချက် နဲ့ သူကြီးဖခင်ကြီး ရဲ့ ကဗျာ ကို ဖတ်မိပါတယ်။
အဲဒီ ကနေ သူကြီး မိခင် ကို ပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။
သူကြီး တို့ အားလုံး ဂရုဏာရှင် မေတ္တာရှင် ကို ရခဲ့ကြတာပါ။
မိခင် ကို အနားမှာထားပြီး စောင့်ရှောက် နိုင်ခဲ့တဲ့၊ စောင့်ရှောက် ခွင့် ရခဲ့တဲ့၊ စောင့်ရှောက် လိုသော စိတ်စေတနာ ပြည့်ဝ ခဲ့တဲ့ သူကြီး ကို အင်မတန် အားကျ ပြီး ချီးကျူး မိပါတယ်။
ဒါဟာ လူတိုင်း ရနိုင်၊ ယူနိုင်တဲ့ ကုသိုလ် မဟုတ်ပါဘူး။
အတော် ကုသိုလ်ကံ ထူးလို့ပါ။
မိခင်ကြီး ပြသွား တဲ့ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း နဲ့ တွဲ နေတဲ့ မမြဲ ခြင်း တွေ ကို မြင်ပြီး လောကီရေးမှာရော၊ လောကုတ္တရာ အရေးမှာပါ ပိုပြီး အောင်မြင်သူဖြစ်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပါတယ်ရှင်။
ဖခင်ကြီး နဲ့ တစ်ကွ သူကြီးတို့ မိသားစု အားလုံး စိတ်အေးချမ်း မှု ရှိကြပါစေ။
..စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ..ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနဲ ရပါကြောင်း…:(
Wednesday, August 1, 2012 | 05:00 PM – 08:30 PM
အမှတ်တရစကားရေးဖို့အတွက်လည်း.. Rose Hills Memorial park ကတာဝန်ယူပေးပါတယ်..
စိတ်မကောင်းပါဘူး ၊ ဖြေဆည်ရာ တစ်ခုကိုတော့ဖြင့်
“ခင်ဗျား” တွေ့မယ်ဆိုတာ သေချာသိပါတယ်။
ယနေ့မှ ဖတ်မိလိုက်လို့ အနဲငယ်နောက်ကျပြီးမှ ဝမ်းနည်းကြောင်းရေးလိုက်ရပေမယ့် တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် …
သူကြီးကို အစ်ကိုတစ်ယောက်လို ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့တာမိလို့ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ဆုံးရှုံးသွားသလို ခံစားရပါတယ် ..
သူကြီးမိခင် ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ ……
စာနာစိတ်နဲ့ ဖတ်လိုက်ပါ .၏..
သူကြီးရဲ့ ချစ်မေမေ..ကောင်းမွန်ရာအရပ်ဒေသကို ..
သူကြီး ကိုအမတ်မင်းပြောသလိုပဲ နှလုံးသားရဲ့ ခံစားပြီး ဖတ်ရှု့သွားပါတယ်။
သူကြီး အမေကချောတယ်နော်။ သူကြီးရေကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။
တဂျီး၏ မွေးသမိခင် ကျေးဇူးရှင် ကောင်းရာမွန်ရာ ဘုံဘဝမှာ ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့လည်း
သူကြီးနှင့်ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းပါကြောင်း…..သူကြီးမယ်တော်ကြီး ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေသော်ဝ်…..
သဂျီး ကဗျာလေးက အဓိပ္ပါယ်တွေ အများကြီးပါတာပဲ.. ကဗျာ ကို ခံစားပြီး နှစ်သက်ပါကြောင်း။။
အန်တီကြီးလည်း ကောင်းတဲ့ ဘုံဘဝမှာ အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ခုမှရွာထဲရောက် မိလို့အသိနောက်ကျ တဲ့အတွက် ခွင့်လွတ်ပါ…
အမေ ကိုချစ်တဲ့ ဒုက္ခ အပေးဆုံး သားဆိုး တစ်ယောက် ကိုယ်တိုင်ဖြစ်လို့ ..
ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး ဘယ်လောက် ကြီးမားတယ် ဆိုတာ ထပ်တူ ခံစားနိုင် ပါတယ် လို့ ပြောရင်း…
မွေးသမိခင်ကြီး ကောင်းရာ ဘုံ ဘဝ မှ ကို ခိုင်ပြုသမျှသော ကုသိုလ်တွေ ကို သာဓု ခေါ်နိုင်ပါစေ…
ထပ်တူသော ဝမ်းနည်းကြေကွဲ မှုဖြင့်
ဦးခိုင်ရေ… မိသားစုနဲ့အတူ ထပ်တူ ထပ်မျှ ဝမ်းနည်းကြောင်းပါခင်ဗျ…
ဦးခိုင် ချစ်မေမေလည်း ကောင်းရာသုဂတိရောက်ပါစေ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးပါတယ်။
ကိုရင် ကမ်းပြန်မကပ်လို့ ကွန့်မန့်နောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ရယ်ပါနော်…
ဦးခိုင်မေမေကလည်း ချောချောလှလှဆိုတော့ တို့ရွာသူကြီး ဦးခိုင်ကြီးလည်း
အပြင်မှာ ခန့်ချောကြီးနေမှာပဲ။ :cool: :cool:
ဦးခိုင်ရေ ထပ်တူထပ်မျှဝမ်းနည်းမိပါတယ်။အမေမရှိတော့တဲ့နောက်မှာ အမေဖြစ်စေချင်ခဲ့တာတွေ လိုက်လုပ်ရင်းအလွမ်းဖြေနိုင်ပါစေလို ့
စီရီကာ ပေါ်လာသည်။ ။
မိဘတိုင်းကို ကိုယ်.ရဲ.မိဘ လို. သဘောထားပြီး ထပ်တူ ဝမ်းနည်းရပါကြောင်း